Nhau - Machubhu Anogona Sei Kukwikwidza Range reTire Saizi?
Machubhu emukati akagadzirwa nerabha uye anonyatsochinja. Ivo vakafanana nemabharuni mune kuti kana iwe uchiramba uchivawedzera iwo vanoramba vachiwedzera kusvikira pakupedzisira ivo vachaputika! Hazvina kuchengetedzeka pamusoro pekuwedzeredza machubhu emukati kupfuura ane musoro uye akakurudzirwa masizi maseru sezvo machubhu anozove asina kusimba sezvavanotambanudzwa.
Mazhinji machubhu emukati anofukidza akachengetedzeka maviri kana matatu saizi yematai, uye hukuru uhu hunowanzo kuiswa mucherechedzo wepakati sehukuru hwakasiyana, kana kuratidzwa senge renji. Semuenzaniso: Turera tirera yemukati chubhu inogona kumakwa se 135/145 / 155-12, zvinoreva kuti inokodzera saizi yematai angave 135-12, 145-12 kana 155-12. Iyo yekucheka lawn yemukati chubhu inogona kumakwa se 23X8.50 / 10.50-12, zvinoreva kuti inokodzera saizi maturu eiri 23X8.50-12 kana 23X10.50-12. Tarakita yemukati chubhu inogona kumakwa se16.9-24 uye 420 / 70-24, zvinoreva kuti inokodzera saizi yematanho e16.9-24 kana 420 / 70-24.
HUNHU HWAKO HWEMA TUBU HUNOGONESA HERE? Yemukati chubhu mhando inosiyana kubva kumugadziri kuenda kumugadziri. Iko kusanganiswa kwerabha yechisikigo, yerabha yekugadzira, kabhoni nhema uye mamwe makemikari makemikari anoona simba rehubhu, kusimba uye hunhu hwese. Ku Big Big matai tinotengesa mhando yakanaka yemachubhu kubva kune vagadziri vakaedzwa uye kuyedzwa pamusoro pemakore. Ngwarira pakutenga machubhu emukati kubva kune zvimwe zviwanikwa sezvo paine mamwe akashata emhando machubhu pamusika parizvino. Akashata mhando machubhu anokundikana nekukurumidza uye anokubhadharira iwe zvakanyanya mune zvese zviri pasi nguva uye mukutsiva.
NDINODA VHIVI IPI? Mavharuvhu anouya akasiyana maumbirwo & saizi kuti agone dzakasiyana siyana dzekushandisa & vhiri rim kumisikidza. Pane zvikamu zvina zvakakosha izvo zvemukati machubhu mavharuvhu anowira mukati & mukati meimwe neimwe pane mashoma emhando dzakakurumbira dzemavharuvhu kusarudza kubva: Akatwasuka Rubber Mavharuvhu - Iyo vharafu inogadzirwa nerabha saka isingadhuri uye yakasimba. Iyo vharuvhu yeTr13 ndiyo yakanyanya kuwanda, inoshandiswa pamotokari, tirera, quads, mower mowers & mimwe michina midiki yeagri. Iyo ine yakatetepa uye yakatwasuka vharuvhu. Iyo TR15 ine yakafara / fatter vharafu simbi saka inoshandiswa mumavhiri ane hombe yevhavha gomba, inowanzo hombe agri michina kana landrovers. Straight Metal Valves - Iyo Valve inogadzirwa nesimbi, saka yakasimba uye yakasimba kupfuura vamwe vayo vemabhora. Ivo anowanzo shandiswa mune yakanyanya kumanikidza kunyorera, uye kana paine njodzi yakawanda yekubatisa / kubvarura nenjodzi nenjodzi. Iyo TR4 / TR6 inoshandiswa pane mamwe maquad. Iyo inowanzozivikanwa ndeye TR218 inova iyo vharuvhu yeagri inoshandiswa pamatarakita mazhinji sezvo ichibvumidza ballasting yemvura. Bent Metal Valves - Iyo vharuvhu inogadzirwa nesimbi, uye ine bend mukati mayo yemadhigirii akasiyana. Iyo bend inowanzo chengetedza iyo vharuvhu kubva pakubata panjodzi sezvo vhiri rinotendeuka, kana kuti ridzivise ichirova vhiri rerimu kana nzvimbo ishoma. Ivo zvakajairika pamarori uye zvishandiso zvinobata michina senge forktrucks, saga trolleys & wheelbarrow. Forklifts inowanzo shandisa vharuvhu yeJS2. Mashini madiki senge marori esaga anoshandisa iyo TR87, uye marori / marori anoshandisa marefu akavharika mavhavha akadai seTR78. Mhepo / Magetsi Mavharuvhu - Iyo vharuvhu yeTr218 yakatwasuka vharuvhu yesimbi iyo inobvumidza mvura (pamwe nemhepo) kuputirwa mukati mayo kuitira kudiridza matairi / michina. Ivo anowanzo shandiswa pane zvekurima michina sematarakita anofamba.
MABHUKU MOMukati EZVIMWE ZVINOSHANDISWA - CHARITY RAFTS, KUSHINGA nezvimwewo machubhu emukati zvinhu zvakanaka zvinobatsira, uye mazuva ese isu tinobatsira kuraira vanhu vari kuzvishandisa kune ese marudzi ekushandisa. Saka kunyangwe iwe uchida iyo yemukati chubhu yekuyangarara pasi rwizi, kuvaka yako yerudo raft zvisikwa, kana yequirky shopu hwindo kuratidza, saka isu tinofara kubatsira. Ndokumbira utore kutaurirana nezvaunoda uye timu yedu inonongedza iwe munzira kwayo. Sekukurumidza kunongedzera, sarudza zvine hungwaru sei hwaungade kuti gomba / gomba riri pakati petubhu rive (iro rinonzi iro rim size uye rinoyerwa muInches). Ipapo, sarudza kuti ingani kukura kwaungade iyo yakazara dhayamita yeakafemerwa chubhu kuti ive (kukwirira kweiyo chubhu kana iwe ukaimisa kumusoro-padyo padyo newe). Kana iwe uchikwanisa kutipa iyo ruzivo isu tinogona kuraira pane dzimwe sarudzo iwe. Ndapota taura nesu kune chero rubatsiro rwakawedzerwa uye ruzivo.